मलाई नाङ्गो बनाएर तातो तेल खन्याए,श्रीमानले यस्तो सम्म गरे-(भिडियो हेर्नुहोस) – Sanjal Nepal
Homeसमाचारमलाई नाङ्गो बनाएर तातो तेल खन्याए,श्रीमानले यस्तो सम्म गरे-(भिडियो हेर्नुहोस)
November 14, 2020 admin समाचार 7332
भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ, पुरा हेर्नुहोला ।काठमाडौं – ह’स्तमै’थुनका बारेमा मानिसहरुको विभिन्न धारणा छ । कोही यसलाई अ’श्लील उ’त्तेजित व्यवहार ठान्छन् भने कोही यसलाई सही ठा’न्छन् । तर विज्ञानले भने ह’स्तमै’थुनलाई ग’लत मान्दैन र यसलाई स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले राम्रो र सामान्य मान्छ । ह’स्तमै’थुनको दौ’रानमा मानिस आफ्नो दिमागमा सु’न्दर पलहरुको कल्पना गर्छ र त्यसकै बारेमा सोच्न थाल्छ । ह’स्तमै’थुन कुनै पनि कोणबाट ग’लत नभएको अध्ययनहरुले पुष्टि गरिसकेको छ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
३. यौ’न दु’र्बलताको उपचार: शी’घ्र स्ख’लनलगायत यौ’न स’मस्या भएका व्यक्तिले ह’स्तमै’थुनमा’र्फत आफ्नो स’मस्या कम गर्न सक्छन् । ह’स्तमै’थुन गरेर ला’मो स’मयसम्म स्ख’लन हुन नदिने कला सिकाउने विधि यौ’न विशेषज्ञले दिँदै आएका छन् ।****** ******
५. प्र’सन्न बनाउँछ: ह’स्तमै’थुनका क्रममा मानिसको श’रीरमा उ’त्सर्जन हुने इ’न्डोर्फिन हा’र्मोनले मानिसलाई प्रसन्न बनाउने काम गर्छ । ६. रो’गप्रतिरो’धी क्षमता बढाउँछ: वी’र्य स्ख’लन हुँदा पुरुषको श’रीरमा कोर्टिसोल नामक हा’र्मोनको मात्रा श’रीरमा बढ्न जान्छ । यस्तो हा’र्मोनले श’रीरको रो’गप्रति’रोधी क्ष’मता बढाउने गर्छ ।******
७. प्र’जनन् रो’ग घटाउँछ: ह’स्तमै’थुनले प्र’जनन्सम्बन्धी रो’ग लाग्ने सम्भावना कम गराउँछ । दिनहुँ ह’स्तमै’थुन गर्ने पुरुषमा प्रो’स्ट्रेट क्या’न्सर लाग्ने सम्भावना कम हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । त्यस्तै, ह’स्तमै’थुनको आ’नन्द लु’ट्ने महिलामा पा’ठेघरस’म्बन्धी इ’न्फेक्सन अथवा मू’त्रनलीमा इ’न्फेक्सन हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ । । एजेन्सी*
January 2, 2021 admin समाचार 1258
August 2, 2020 Administer Banner Post, अन्तर्राष्ट्रिय, भिडियो, मनोरंजन, रोचक, समाचार, स्वास्थ्य /जिबनशैली 486412
January 3, 2021 admin समाचार 771
LEX 18 agenda conversation: Job club (486412)